Wisdom of Dhamma: ဘလော့ဂါတစ်ဦးပြောတဲ့ မေတ္တာ
တနေ့မှာ မေတ္တသုတ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်တွေကို ရှာရင်း ဖတ်ရင်းနှင့် Carla kay white ရဲ့ http://carlakaywhite.com ကို အမှတ်မထင် ရောက်သွားမိပါတယ်။ (အင်္ဂလိပ်စာ တော်တော် တတ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်လိုက်နှင့်ဦး။ မတတ်တာမှ အခု ဒီစာကို ဖတ်နေသူသာ သိရင် အချိန်မရတဲ့ကြားက သင်ပေးချင်လောက်အောင်ကို မတတ်တာနော်။) သူမက The Loving Kindness Meditation ဆိုတဲ့ နာမည်နှင့် ပို့စ်တိုတိုလေး တင်ထားပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါက သူမမှာ task နှစ်ခု ရှိပါသတဲ့။ ပထမတာဝန်က သူ ဘာကို တကယ်လုပ်ချင်ပါလိမ့်လို့ သူ့ ကိုယ်သူ ပြန်မေးတဲ့တာဝန်ပါတဲ့။ အဲဒီမှာ အဖြေပေါင်းစုံက ပြန် ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဝင်အလာဆုံး ရိုးစင်းတဲ့ စကားလေးကတော့ မေတ္တာတရားပါတဲ့။ ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ သူလုပ်ရတဲ့ အရာနှင့် သူနှင့် အတူ ရှိနေသူတွေကို ချစ်ခင်ချင်ပါသတဲ့။
အင်း … နောက် task တစ်ခုကတော့ နဲနဲ ပိုရှပ်ထွေးတယ်ဆိုပါလား။ ဘာများပါလိမ့်မလဲလို့ ဆက်ဖတ်မိ တော့ သူမက "နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မေတ္တာဘာဝနာ (မေတ္တာပွားများမှု)ကို ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်လုပ်ပါတယ်" တဲ့။ "ဒီမေတ္တာဘာဝနာ (သူ့အဆို ကဗျာ) ပွားပုံလေးက အတော်ကို လှပရုံတင်မက သူ့အတွက်ရော လူတိုင်းအတွက်ပါ သူလိုချင်တဲ့ မင်္ဂလာအပေါင်းကို စုရုံး သိမ်းကြုံးပေးတယ်" တဲ့လေ။ သူကတော့ ဒါကို ရက် အနည်းငယ်ကြာ ပွားများနေပြီး ထူးခြားမှုကို သူတွေ့နေရပြီ လို့ ဆိုထားရုံမျှမက သင်လည်း တစ်ပတ် နောက်ပိုင်းမှာ ထူးခြားမှုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါတယ်တဲ့။ သူပြောတဲ့ ကဗျာဆိုတဲ့ မေတ္တာပွားပုံ လေးကတော့ အောက် ပါအတိုင်းပါပဲ။
ဒါကို ဖတ်ကြည့်မိတော့ မေတ္တာပွားပုံအကြောင်းတိုတိုလေး စာသံ ပေသံတွေမပါပဲ ရေးဦးမှပဲဆိုတဲ့ အတွေးလေးက ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ (Dhamma Wisdom လို့ နာမည်ကြီး အခန့်သားယူထားပြီး ဘာမှ တူတန်အောင် မရေးတတ်တာ မရေးသေးတာကိုတော့ တောင်းပန်ပါတယ်)။ ဒီဘလော့ဂါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။ သူမက (သူ့စကားအရ) ယောဂကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ။ ဗုဒ္ဓက သူ့တရား တွေဟာ သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ တရား၊ ဒါကြောင့်သူ့ကို ယုံကြည်သူများသာ ကောင်းကျိုးတရား ရမယ်၊ သူ့ကို မယုံကြည်ရင် ငရဲရောက်မယ် လို့ ဘယ်သောအခါကမှ ဟောခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝအမှန်တရားကို သဗ္ဗညုတဉာဏ် တော်နှင့် ရှာဖွေထိုးထွင်းသိမြင်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ် အလိုက် စရိုက်နှင့် လျော်စွာ ဟောခဲ့တဲ့ တရားပါ။ သဘာဝ အမှန်တရားဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကို ယုံကြည်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ ဟောမှန်းတောင် မသိသူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်ကြံသူဟာ ကောင်းကျိုးတရားရမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ စာရေးသူ ဖတ်မိတဲ့ ဒီ ဘလော့ဂါတော့ ထူးခြားမှုကို တွေ့နေရပြီဆိုတာ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ မေတ္တာပွားမှုက ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အရာပါပဲဆိုတာကလဲ ရှင်းပါတယ်။
လောကလူသားတွေမှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာန၊ မနာလိုမှု၊ ဝန်တိုမှု စတာတွေနှင့် ပြည့်နှက် ပြွတ်သိပ်လို့ နေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ သူများက ဒုက္ခပေးတာထက် ကိုယ်စိတ်က (ကိုယ့်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိလေသာက) အများကြီး ပိုဒုက္ခပေးပါတယ်။ ဥပမာ သူများက ကိုယ့်ကို မခံချင်အောင် ပြောလိုက်တာက တစ်ကြိမ် တစ်ခါရယ်ပါ။ အဲဒါကို ကိုယ်က ခဏခဏ စဉ်းစားလို့ ဒါမှမဟုတ် သတိ ယလို့ ဒေါသမီးတွေ ကိုယ့်ကို လောင်တာက များပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဒီဒေါသမီးလောင်ခံနေရလို့ တယ်လဲ ဆင်းရဲလှပါလားလို့ မသိ ရှာတော့ သို့မဟုတ် သတိလွတ်နေတော့ မိမိမှာသာ ဆင်းရဲမှုက မဆုံးနိုင်အောင် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ စိတ်တွေ အလွန်တရာမှကို ပင်ပန်း ရပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းတော့ ကိုယ်လဲ ပင်ပန်း မောဟိုက်ရပြီပေါ့။ "စိတ်ထောင်းတော့ ကိုယ်ကျေ" လို့ ဆိုကြတယ်မဟုတ်လား။
ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ရှိနေမှာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ နေရသူတွေ ဆို အလုပ်နှင့် လက် မပြတ်ဖြစ်နေရလို့ စက်ရုပ်အဖြစ်တောင် ရောက်လုမတတ်ပါပဲ။ ဒီတော့ အလုပ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှု၊ လူမှုရေး မပြေလည်မှု စတဲ့ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲမှုတွေ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဖြေဖျောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ် ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အညစ်အကြေး (စိတ်မချမ်းသာမှု) ကို စိတ်နှင့်ဖြေတာက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓ အလိုတော်လဲ ကျပါတယ်။
မေတ္တာပွားရင် ... ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ရခြင်၊ ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ရာမှ နိုးထရခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုးများ မမြင်မက်ရခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုး (၁၁) မျိုး ရတယ်လို့ ကျန်းဂန်တွေက ဖော်ပြ ပါတယ်။
ကျိုးကြီးမားသည်" လို့ ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူကြောင်းလဲ လေ့လာရဖူးပါတယ်။ ဒီအကျိုးတွေကို မရချင်ပါဘူး ဆိုရင်တောင် ရင်ထဲမှာ မလိုအပ်ပဲ သိမ်းဆည်းထားမိတဲ့ စိတ်မျိုးတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ နံနက် အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်ပြီးသည့် အခါမှာ ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ဖြစ်စေ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက်တော့ ဘုရားရှေ့မှာ) ထိုင်ပြီး မျက်လုံးကို အသာအယာ မှိတ်ပါ။ သတ္တဝါ အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာ မေတ္တာထားပြီး . . .
သတ္တဝါများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာကြပါစေ။ ချမ်းသာကြပါစေ။
စိုးရိမ်ခြင်း ကင်းကြပါစေ။ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ။
မိမိကိုယ်ကိုယ် ချမ်းသာအောင် ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ လို့ တိုတို ကျဉ်းကျဉ်း လဲ မေတ္တာပွားနိုင်ပါ တယ်။
မေတ္တာပွားနည်းကတော့ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ရေးတဲ့ "မေတ္တာဝါဒ" မှာကို အတော်စုံလင်လှတဲ့ မေတ္တာပို့နည်းတွေ ပါပါတယ်)။ စလုပ်လုပ်ခြင်းတော့ ပါးစပ်က လိုက်ဆိုနေမိတတ် ပါတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်နှင့် ပွားရ ပို့ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပျက်စရာ မလိုပါ။ နည်းနည်းလေး အကျင့်ရသွားရင် စိတ်နှင့်ပို့လို့ ပွားလို့ရတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားမှာပါ။ မေတ္တာပွားနေရင် အားလုံးကို အမြဲမေတ္တာ မထားနိုင်တောင် (ပွားများနေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာ) မေတ္တာမှလွဲပြီး အခြား စိတ်တွေ မရှိလို့ ပွားများနေသူ ရဲ့ မျက်နှာဟာ ကြည်လင်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အဲဒီ အခိုက်အတန့်လေးမှာ လောဘ စိတ်၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ မနာလိုမှု၊ ဝန်တိုမှုစတာတွေ မရှိလို့ ကာယကံရှင် စိတ်ချမ်းသာမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။
နောက်အကျင့်ရသွားရင် ကားစီးရင်း ရထားစီးရင်းလဲ ပို့နိုင် ပွားနိုင်သွားမှာပါ။ အကျင့်ရလာလေ လွယ်လေဖြစ်မှာပါ။ မေတ္တာပွားများတာ အပါအဝင် တရားအလုပ်လုပ်ရတာ လွယ်ကူကြောင်းကို "ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ ထမင်းပွဲ ထိုင်စားရတာ၊ တည်ထားတဲ့ ရေအိုးမှာ ခပ်ပြီး သောက်ရတာကမှ ခက်ပါသေးတယ်။ ကြာပါသေးတယ်။ ရုပ်ပေါ် နာမ်ပေါ်မှာ ထားရတာ (ရှုမှတ်ရတာ) အလုပ်လဲ မပျက်၊ ငွေလဲ မကုန်၊ လူလဲ မပင်ပန်း၊ နေရာလဲ မရွေးရ၊ လွယ်လိုက်တာဗျာ။ လွယ်လိုက်တာမှ အင်မတန် လွယ်တယ်ဗျာ" လို့ ရဟန္တာလို့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးက တဖွဖွ ထောက်ခံ ဟောကြား တော်မူကြောင်း ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ရဲ့ "ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ"၊ စာမျက်နှာ ၂၄ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
မိမိက ယောဂီတစ်ယောက်လို အမြဲအားထုတ်တာ မဟုတ်လို့ ဆရာတော် မိန့်ကြားသလောက် မလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့ ရထားစီးရင်း ကားစီး ရင်း ပွားများလို့ရတဲ့ အဆင့်အထိတော့ အနည်းဆုံး ရောက်မယ်ဆိုတာ စာရေးသူ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခရီးသွားရင်း ဘာအကြောင်း၊ ဘယ် သူ့အကြောင်းမှ မစဉ်းစားပဲ အသက်ကို သုံးခါလောက် ဝဝရှူ၊ မျက်လုံးလေး အသာအယာမှိတ်ကာ ရထားပေါ်၊ ကားပေါ်က ခရီးသွား ဖော်တွေကို ရည်မှန်းပြီး ခရီးသွားများအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ၊ ချမ်းသာကြပါစေ စသည့်ဖြင့် ပွားများနေရင် စိတ်ချမ်းသာ တည်ငြိမ်မှု တို့ကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အချိန်လဲ သီးသန့် မပေးရတော့ဘူးပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုရင် ပွားများအပြီးမှာ ဒီအကျင့်မြတ်ဖြင့် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာအား ပူဇော်ပါ၏ လို့ ဘုရားတောင် ပူဇော်လို့ ရပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် စိတ်လဲ ကြည်လင် အေးမြ၊ ကုသိုလ်တွေလဲ ရပြီပေါ့။ ရတဲ့ကုသိုလ်ကလဲ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ ချီးမွမ်းရတဲ့ ကုသိုလ်မျိုးမို့ လုပ်သင့်တယ် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အားလုံး ကိုယ် စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ!
၁၂၊ ၀၄၊ ၂၀၁၀